hoos-u-dhaca xidhiidhka dawladda maraykanka iyo ururka midowga yurub.
Waa maxay sababta uu Mareykanku ahmiyaddii xidhiidhka uu la lahaa Midowga Yurub uu hoos ugu dhigay? By; Nasir Hassan Timoweyne
Ka bacdi shirkii wadamada G7, hogaamiyaha Germalku Mrwo Merkel waxay qirtay in ay Midawga Yurub dib uga fiirsanayo xidhiidhka US waaxayna tidhi hadal ay warbaahintu ciwaan uga dhigeen, “Yurub iskuma halayn karto US iyo UK”. Hadaba maxaa iska badalay xidhiidhkii Yurub iyo Mareykanka? Waa su’aasha maqaalkeena maanta aan ku lafa guri doono.
Isbadalka ku dhacay xidhiidhka US iyo Yurub sababtiisa waxaan u kala qaadaynaa laba, sababaha hada jira ee soo dadajijey inuu xidhiidhku daciifo. Tusaale ahaan, sida, hadalada Trump ka soo yeedha iyo inagoo ka warbaahinta ka maqala isagoo in badan is hortaagaya heshiisyada Yurub sida kii ugu dameeyey ee wasakhawga hawada oo kale (Precipitating cause).Ttaasna waa wax maalin walba aan ka dhageysano warbaahinta kala duwan sida BBC, CNN, Aljazeera wim. Iyo sababta labaad oo ah sababo qoto dheer oo soo jiitamayey iyo/ama sababo ka dhasha isbadbaddaladal ku dhaca siyaasada umuuraha dibedda ee wadammadda caalamka (deep cause). Sababtan dambana waa mida aan ku falanqeyn doono maqaalkeenan maanta, hadii Eebe idmo.
Sida ay aaminsan yihiin culimada cilmiga siyaasada caalamka (political science) ee fikirka Realism ka ee ugu hogaamiyo Dr. Prof. John Mearshiermer (Structural Realism ) iyo Kennet Waltz waxa jira wax loo yaqaano danaha strategy yadeed ee ugu waaweyn ee maraykanku leeyahay (America’s core strategic interests ama ACSI) taas oo isbadasha wakhti ilaa wakhti. 1900 – 2000, meelaha uu maraykanku ahmiyadaha ugu waaweyn siiyo waxay kala ahaayeen waa sidey u kala horeeyaane, sidan hoos ku qoran:
1. Gobolka uu ku yaalo mareykanku (Northern Hamisphere) marwalbana tani waa mida 1aad.
3. Woqooyi-bari Asia
4. Gacanka Persia (Persian Gulf).
Aan ku bilawno’e, gobolka uu ku yaalo Mareykanku juqraafi ahaan (Northern Hamisphere) waxa uu ka ilaaliyaa waligiiba in wadan awood leh oo iska caabin kara uu ka soo boxo ilaa iyo hadana uu ku guleystay. Bal u fiirso wadamada la jaarka ah, sida Kanada iyo iyo Miksiko. Ku soo xijisiiyoo, Yurub-na, waa gobolkii ama qaaradii ay ka dheceen dagaalada 1aad iyo 2aad. Waana gobol xaasaasi ah oo uu Mareykanku inuu isha ku hayo ay muhiim tahay. Iyada lafteedana waxa uu kula dhaqmaa siyaasad ah inaan Yurub ka soo bixin wadan ka awood weyn wadamada kale ee Yurub ku yaala (anti hegemony in Europe). Waayo hadii ay dhacdo in Yurub uu ka soo boxo wadan kuwa kale ka tun weyn ‘hegemony’ taa macnaheedu waxa weeyi in uu ka soo baxay caalamka wadan u dhigma USA. Tassi waxay keeneysaa in nidaamka siyaasiga ee calaamku isku badalo aduunyo laba wadan ka arimiyaan ( bipolar system ), sidii aduunku ahaa 1990kii wixii ka horeeyey markaas oo labada awoodood ee ugu quwad weyn caalmku ahaayeen USA iyo SOVIET UNION/Russia, halka uu maanta ka yahay caalmku duni wadan kaliya ka taliyo ( Uni-polar system ) wadan kaas oo ah Mareykan.
Hadaba hadii ay dhacdo in wadan hegemony ah ka soo boxo Yurub, waxa meesha ka baxaya libaaxeynta Mareykanka ee uu dunida ku hayo.
Inskasta oo ay jiraan wadamo awood badan Yurub dhexdeeda, hadana waxa uu ku ilaaliyaa dheeli tir iyo inay isku awood ahaadaan wadamada halkaas ku yaalaa oo iyagu is hor fadhiyaan si uu kalidii dunida uga taliyo ama u ahaado wadanka ugu tunka weyn (Hegemony state). Arintaana hada uu ku guuleystay, waxwalbana sidii uu rabay ayey u socdaan.
Markii la soo gaadhay sanadka 2000kii wixii ka dambeeyey waxa iskala badalay meelihii uu kalaaha danaha ahmiyadoodii (American Core Strategic Interest ACSI ). Sidaa darteed sidan ayey isku badaleen:
1. Gobolka cidhifka qoqooyi ee dunida ( Northern hemisphere ). Ahmiyada gobolka uu ku yaalo Mareykanku ay isaga u leedahay isma badasho ilaa iyo hada.
2. Woqooyi-bari Asia
3. Gacanka Persia
4. Europe. Bal u fiirso liiska ahmiyadeynta gobolada aduunka ee USA. Halkii ay Yurub Mareykanka ugu jirtay ahmiyada labaad 2000kii wixii ka horeeyey kaalinta labaad, markii la soo gaadhay 2000kii wixii ka dambeeyey ( post 2000 ), Yurub waxay gashay kaalinta 4 aad ee liiska ahmiyadeynta goboladda caalmka ee US, waxana badalay booskeeda Gobolka Woqooyi Bari Asia, waxaaney sii hoos martay Gacanka Persia ( Persian Gulf ).
Waa sababtaa, sababta ay Madaxweyne Trump ugu fududaatay inuu ku sheego NATO mid aan ahmiyad weyn ku fadhiyin iyo in uu ugu hambalyeeyo Ingiriiska ka bixidii uu ka baxay Midawga Yurub. Waa sababtaa sababta kharashka uu ku bixiyo NATO ay u dumaqday ee uu u lexjecleeyey maanta isaga oo ku andacooday in aanay jirin wax ku khasbaya inuu bixiyo kharash intaa leeg kuna eedeeyey wadamada Yurub inay bixiyaan kharash yar. Waa sababtaa, sababta uu ugu sigtay inuu ku dhawaaqo inuu ka boxo wadankiisu gaashaan buurta NATO.
Hadii aan u soo noqono sababta ay Woqooy Bari Asia, u noqotay ahmiyada 2aad ee 'geopolitics'ka Mareykanka, gobolkaasi waa halka uu ku yaalo Dalka Cchina kaas oo ah awood hada soo kacaysa oo uu Mareykanku iska eegayo. Waa barta ay ku yaalaan Woqooyiga Kuriya oo raba inuu hubka Nuliyerka samaysto oo col la ah US, iyo Koonfur Kuria oo ah wadan demoqradi ahoo US ay saaxiibo yihiin, islamarkaana Woqooyiga. Kuuria colaad soo jiitamaysay ilaa nus qarni ay ka dhaxayso. Hasa ahaatee wadanka ugu weyn ee uu iska eegayaa waa China. Waa sababta uu u soo faragaliey jasiiradaha ay isku haystaan Japan iyo China ee ku taalo bada Koonfur-ta China ( South China Sea). Halkaas ayey arrinta ugu xaasaasisan dunida iyo Mraykanku ka jirtaa.
Persian Gulf waxa weeyi gobol saliida hodan ku ah sida wadama Iraq, Iran, Kuwait iwm, Maraykankana ahmiyad dhaqaale oo weyn ayey ugu fadhidaa. Gobolkaasna ma jirto cid ama awood ku haysata Mareykanka. Taasi waxay keentay in ay labada gobolba meesha ka saaraan xaga dambena mariyaan Europe.
Si kastaba ha ahaatee lama odhan karo dantii uu ka lahaa Europe Mareykanku way dhamaatay laakiin ahmiyad siintiisii ayaa hoos u dhacday. Sababtuna waxa weeyi, Mareykunku waxa uu xulafo ula ahaa Yurub, waxa cabsi ku hayay labadoodaba ( US & Yurub ) Rushka. Waxa uu aaminsan yahay NATO oo uu Mareykanku hogaaminayo waxa loo dhisay in ay tahay si loogu dheeli tiro gaashaan-buurtii WARSO oo uu Rushku hogaaminayey. Tiina waxay burburtay 1990kii.
Mareykanku waxa uu iska ilaalin jiray oo uu u arkayey awood khatar badan SOVIET UNION oo aahaa Ruush-Weynihii, taas oo xilligaa dunida ka dhigtay meel laba wadan ay ka taliyaan bi-polar. SOVIET UNIONkiina wuu burburay. Sidaa darteed, Trump oo aaminsan mabda’a Realismka waxa uu aaminsan yahay in aanuu Ruushku khatar ku ahayn wadankiisa iyo Yurub toona, sidaa darteed aanay habooneyn ku sii dhaganaanta US ee NATO iyo taageerista jiritaanka Midawga Yurub iyo in uu kharash ku sii bixiyo ilaa iyo hada. Waxana uu ku dhawaaqay in aanuu Yurub ammaankeeda ilaalin doonin waayo waxa uu sheegay in uu kharash badanni kaga baxo wadankiisa, iyada oo aanay muhiimba ahayn.
Waxa uu aaminsan yahay meesha Mareykanka khatartu kaga soo socotaa iney tahay W.B. Asiya, oo uu ugu weyn yahay wadanka China oo sida uu u socdo u eeg in uu noqdo mustaqbalka fog Maraykanka oo kale inkasta oo woxoogaa dhaqaalihiisii gaabis galay 3dii sano ee ugu dambeeyey.
Sidaa darteed Maraykanka waxa u fiican in uu la saaxiibo Ruushka si ay iskugu bahaystaan in ay is hortaagaan awoodda Shiinaha ( China ) ee koreysa. Xasuuso sida uu Shiinihu ula tartamayo Maryakanka. Maraykanku waxa uu la saaxiibay India, halka uu Shiinihun hada rabo in uu xidhiidh la yeesho Baakista - taas oo 16/01/2017 uu Shiinuhu siiyey 2 markab oo kuwa dagaalka ah oo casri ah oo kuwa diyaaradaha xambaara ah.
Guntii iyo gabagadii xidhiidhka Maraykan iyo Yurub ma aha mid fudud oo sidaa ku burbri kara laakiin dantiisu meelsha ay gasho ayaa u muhiim u ah Marakankanka. Marwo Merkel-na waxaan is odhan karnaa waxay fahamtay siyaasada cusub ee arimaha dibedda Mareykanka, waxaanad ka dhandhansan kartaa hadalkeedii 28/05/2017, ay ku sheegtay in wadankeedu xidhiidh iskaashi la yeelan doono Ruushka, iyada oo ku dartay hadalkeeda in aanay hada wixii ka dambeeyey Yurub isku haleyn doonin US iyo UK. Akhriste ( Gaar ahaan ardayda political science-ka ) hadii aad xiiseynayso maqaladan ku saabsan xidhiidhka caalamiga, iyo wixii talo iyo tusaale ah noogu soo hagaaji emailka hoos ku qoran.
W/Q: -Mr. Nasir Hassan Timoweyne
Posted on Monday, May 29 @ 23:54:46 UTC by admin
Print hoos-u-dhaca xidhiidhka dawladda maraykanka iyo ururka midowga yurub.
hoos-u-dhaca xidhiidhka dawladda maraykanka iyo ururka midowga yurub. - hoos-u-dhaca xidhiidhka dawladda maraykanka iyo ururka midowga yurub.
Name : Cilmi
Subject : Re : hoos-u-dhaca xidhiidhka dawladda maraykanka iyo ururka midowga yurub.
Moses Ochonu: Neoliberal globalisation, the white working class and American exceptionalism.
Pages : [ hoos-u-dhaca xidhiidhka dawladda maraykanka iyo ururka midowga yurub. 1 ]